Tunisia: Ndị njem njem ritere pasent 18, ihe ndị njem erute ruru nde $ 300
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Tunisia: Ndị njem njem ritere pasent 18, ihe ndị njem erute ruru nde $ 300
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia
Nwere ike 11, 2019
Tunisia edeputara ịrị elu ịrị na asatọ nke ndị bịara njem nleta n'ime ọnwa anọ mbụ nke afọ a, ma e jiri ya tụnyere oge ahụ n'afọ gara aga. Dabere na Ministry of Tourism and Handicrafts, ọnụọgụ ndị njem si mba ofesi kemgbe Jenụwarị karịrị nde abụọ, na ego ha ruru ihe ruru US $ 18 nde.
Ministri na-eme njem nlegharị anya na ọrụ aka na-achọ ịbịaru nde ndị njem iteghete na oge a. Ndị na-eme nnyocha na-ekwu na ihe ngosipụta agam n’ihu kwa ọnwa sitere na 25 ruo 30 pasent maka ahịa niile, ọkachasị maka ahịa Russia na China.
Banyere njem a na-eme njem na El Ghriba, Djerba, ndị isi kwusiri ike na a na-akwado nkwado niile maka mmemme a ga-eme na Mee 22-23.
Onye odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Organisation UNWTO gosipụtara nkwado zuru oke ya na ndị ọchịchị Tunisia na imezu ebumnuche ha nke ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị njem na 2019.
Ahịa Maghreb, nke na-anọchite anya pasent 44 nke ndị njem nleta ruo ugbu a, ahụla ịrị elu na-arịwanye elu. N'ime oge mbụ nke 2019, Tunisia natara ihe dịka 496,000 ndị Algeria na-eme njem nleta na ndị Libya 473,000.
Ọtụtụ mba wepụrụ mmachi ime njem na Tunisia na mpaghara ya. Nke kachasị bụ Spain, n'izu a na Japan na Machị 2019. Ndị ọchịchị nọ na mba ndị a amachibidoro njem gaa Tunisia na-esote oke ụjọ nke mwakpo ụjọ na Bardo National Museum na ebe ezumike n'akụkụ osimiri n'obodo Sousse.
Afrika ndi njemNdị ọrụ gọọmentị kelere Tunisia ka ha bụrụ ezigbo ihe atụ nke nkwụsi ike na njem.